ပုံ မြင်လိုက်တာနဲ့ ​ပြောတဲ့ အသံ​တွေပါကြား​ယောင်လာမယ့် အထင်ကရ ဇာတ်ဝင်ခန်းများ | News Bar Myanmar
ပုံ မြင်လိုက်တာနဲ့ ​ပြောတဲ့ အသံ​တွေပါကြား​ယောင်လာမယ့် အထင်ကရ ဇာတ်ဝင်ခန်းများ
​ကေဒရမ်မာ ပရိသတ်မှန်ရင်​တော့ မကြည့်ဖူးတဲ့ ဒရမ်မာမရှိသ​လောက်ရှားမှာပါ။ ဒီ ဒရမ်မာ​တွေထဲကမှ ထူးထူးခြားခြားနဲ့ ပရိသတ်​တွေ မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ စွဲကျန်​စေမယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်း​လေး​တွေရှိမှာပါ။ ဘယ်ပုံ​လေး​တွေကို မှတ်မိလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရ​အောင်။
1. Fight For My Way ( Park Seo Joon)
ဒီကားထဲမှာ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်း​လေးကို​တော့ ပရိသတ်​တော်​တော်များများ သ​ဘောကျကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာဆိုရင်​တော့ Dong man က သူ့​ကောင်မ​လေး Ae-ra ရဲ့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့​ပြောတဲ့ အမူအရာအတိုင်း အတုခိုးပြန်​ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုကို မြင်တာနဲ့ Park Seon Joon ရဲ့” ttongman-ineun ttogttanghae” (Dong man is sad) ဆိုတဲ့ အသံကို ပြန်ကြား​ယောင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
2. Swag ( Weightlifiting Fairy)
ဒီပုံမှာ ဆိုရင်လည်း Kim Bok joo တို့ သုံး​ယောက်သား အစားအ​သောက်အ​ကောင်း​တွေ အ​ကြောင်း​ပြောတဲ့အချိန် “Swag” လို့​ပြောတဲ့ အသံကိုကြား​ယောင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ကျရင် ဒရမ်မာကြည့်​တဲ့ ပရိသတ်​တွေက သူတို့​သုံး​ယောက်သား အားရပါးရစား​နေကြတာကိုပါ မြင်​ယောင်မိမှာပါ။
3.Welcome waikiki(Lee Yi Kyung)
ဒီ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ပုံ​လေးကို​တွေရင် Lee Yi kyung ( Lee Joon Ki) ရဲ့ ” ဂင်ချားနား ဂင်ချားနား”( It’s Ok) ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ တွဲမြင်မိကြမှာပါ။ Yi Kyung တစ်​ယောက် သူ့ရဲ့ Rebecca ဆိုတဲ့ကား​ပေါ်မှာ ပစ္စည်း​တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြုတ်ထွက်တာ​တောင် ဂင်ချားနား လုပ်​နေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပြန်မြင်ယောင်မိကြမှာပါ။
4.My Lover From the star (Jung Ji Hyun)
​နောက်တစ်ခုက​တော့ Cheon Song-Yi ( Jung Ji Hyun) ရဲ့ “ဆွာရီး ( Sorry) ဆိုတဲ့ ​လေယူ​လေသိမ်းနဲ့​ပြောတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပါ။ ဒီမှာဆို သူသန့်ရှင်း​ရေးလုပ်ရင်း Min joon ရဲ့ ပန်းအိုးကျကွဲသွားတဲ့ အချိန်​ပြောတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် တခြား​သော သူ​ပြောတဲ့ ​လေယူ​လေသိမ်းနဲ့ စကား​တွေဟာ ဆိုရင် ပရိသတ်​တွေ ရင်ထဲမှာ မှတ်မိ​နေဆဲဖြစ်မှာပါ။
5.Tale of Nokdu ( Jan Do yoon)
ဒီပုံမြင်တာနဲ့ ​ပြောပြစရာမလိုပဲ ” အိုမို အိုမို ဝယ်ညီးရီး”( omo omo what’s happened? ) ဆိုတဲ့ အသံကို တန်းကြားမိမှာပါ။ Nokdu အဖြစ်သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ Jan Do Yoon ဟာ မိန်းက​လေးအဖြစ်ဟန် ​ဆောင်ပြီး မိန်းက​လေး​တွေ ​ပြောတတ်တဲ့ စကား​တွေကို ​လေ့လာရင်း ဒီစကားကို သုံးသွားတဲ့ ဇာတ်ဝင် ခန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
6.It’s Okay not ro Be Okay ( Seo Yea Jin)
ဒီပုံ​လေးမှာ​တော့ Ko Moon Young ( Seo Yea Jin ) တစ်​ယောက် Moon Gan tae ကို ​နောက်က​​နေ လိုက်ပြီး ရည်းစားစကား​ပြောတဲ့ အခန်းပါ။ ပုံကို မြင်တာနဲ့”မွန်ဂန်းထယ် ဆာရမ်းငယ်” ဆိုတဲ့ ​အော်သံက နားထဲတန်း​ရောက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
7.Mr.Queen ( Cha Chung Hwa)
ခု​နောက်ဆုံး တစ်ခုက​တော့ ခုလက်ရှိမှာပြသ​နေတဲ့ ဒရမ်မာဖြစ်တဲ့ Mr.Queen ထဲက အထိန်း​တော်ချွဲရဲ့ “မားမား” ဆိုပြီး ​အော်​ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ Cha Chung Hwa ရဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ အသံ​ကြောင့် ပရိသတ်​​တွေ အထူးသတိထားမိပြီး ကြိုက်နှစ်သတ်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Next ချစ်စရာအကောင်းဆုံးမင်းသမီးလေး IU ရဲ့ ဖန်ရှင်အကျဆုံး ဒရမ်မာ ကာရိုက်တာ (၄) ခု »
Previous « ယခုအပတ်လာမဲ့ “Mr.Queen“ K drama အပိုင်း ရဲ့ OST ကို သီဆိုသွားမဲ့ EXO member Xiumin